Uluhlu oluphezulu lwe-18 lweekhosi zoqeqesho lootitshala 2022
Eli nqaku libonisa uluhlu lweekhosi zoqeqesho lootitshala kunye neenkcukacha zazo. Iikhosi zoqeqesho lootitshala zenzelwe ootitshala abaqeshwe ngoku okanye abo banqwenela ukuba babe ngabodwa bokuphucula izakhono zabo kwaye babaxhobise ngolwazi olutsha lwetekhnoloji.
Ukufundisa sesinye sezona zakhono zixabisekileyo kwaye zihlonitshwayo emhlabeni, sisakhono esinceda ukuveza abantu kule nto bayiyo ngoku okanye ekujolise kuyo. Ukufundisa sisakhono esele sikho kwakudala, kwaye akunakuze soyiswe kungasafuneki njalo.
Ufike kule ndawo ukuyo ngoku, okanye kwindlela ethile yomsebenzi ngoncedo lootitshala abambalwa. Ootitshala abapheleliselwanga kwabo bakumaziko emfundo kuphela, abazali bakho, abantakwenu abadala, abantu abayimizekelo nabo bakolunye uhlobo, abafundisi-ntsapho.
Kungenxa yokuba ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo banikezele ngolwazi kunye nezakhono kuwe kwaye bakukhuthaze ukuba wenze le uyenzayo ngoku okanye ujonge ukuyenza. Nangona kunjalo, olona hlobo luthandwa kakhulu lootitshala ngabo bakumaziko emfundo kwaye ngaphandle kokuba ufundiswe ngabazali bakho ubomi bakho bonke ngekhe udibane nabo.
Ootitshala ligwiba eluntwini kwaye benze kwaye basaqhubeka nokwenza umsebenzi omangalisayo ekuphuhliseni izakhono zibe yimpumelelo esekwe. Ukuba unqwenela ukuba phakathi kwezi ntsika zoluntu emva koko bopha kuba ayingomsebenzi olula.
Njengabagqirha, iinjineli zekhompyuter, abakhi bezakhiwo, njl njl.njalo baqeqeshiwe yile ndlela ootitshala bahamba ngayo noqeqesho, kodwa kule meko, ngokungqongqo ngakumbi kuba banikwe uxanduva lokuphuhlisa uhlobo olufanelekileyo lwabantu abavela kuzo zonke iinkalo zobomi.
Ke, ukuba sele ungutitshala kwaye uziva ngathi uyatyhafa okanye ujonge ukuba ungomnye kodwa ungazi ukuba ungayiphatha le yeyona post ilungileyo ufundayo. Eli nqaku likugubungele ukuba ufuna ukupholisha izakhono zakho zokufundisa okanye ufuna ukuvavanya amanzi ngaphambi kokuntywila ngokupheleleyo, ukwindawo elungileyo.
Apha, sabelane esidlangalaleni uluhlu oluhlanganisiweyo lwezifundo zootitshala onokuthi ubhalise kuzo ukuze uzalisekise naziphi na iinjongo ezingasentla.
Phambi kokuba siqhubeke sidwelise ezi khosi zoqeqesho lootitshala, kufanele kuqala, sicime imibuzo ebaluleke kakhulu ekusenokwenzeka ukuba ibikhathaza “abatsha”.
Yintoni iikhosi zoqeqesho lootitshala?
Iikhosi zoqeqesho lootitshala zibalulekile, zihlaziyiwe, kunye neenkqubo zokufunda ezidibanisa zombini ithiyori kunye nokusebenza. Ezi zifundo zinendlela emanyanisiweyo, inemixholo yoqeqesho oluphezulu, kwaye ziindlela zokufunda ezisetyenziswayo, ezivavanyiweyo nezithembakeleyo.
Zingaphi iindidi zoqeqesho lootitshala ezikhoyo?
Kukho iindidi ezintlanu ikakhulu zeenkqubo zoqeqesho lootitshala eziyilelwe ukukukhokela kwindlela yokufunda, zezi:
Uqeqesho lootitshala baseprayimari
Uqeqesho lootitshala besekondari
Uqeqesho lootitshala bezemfundo ephakamileyo
Ikhosi yexesha elingakanani yoqeqesho lootitshala?
Ixesha lenkqubo yoqeqesho lootitshala lithatha ixesha elifanayo kwiminyaka emithathu ukuya kwemine njengesiqhelo esisigxina kunye neminyaka emine ukuya kwemithandathu ukuba uthatha isigqibo sokuthatha ixesha lesingxungxo.
Zithini iintlawulo zoqeqesho lootitshala?
Uqeqesho lootitshala lukwanazo nezinye iinkqubo zokufunda ezihlawulwa ziifizi ngokweziko nendawo. Umzekelo, indleko zoqeqesho lootitshala eyunivesithi eCanada yahluke ngokupheleleyo kuleyo yaseyunivesithi yase-UK okanye e-United States.
Ngenxa yesi sithuba sikhulu, asinakho ukunika isixa esithile semirhumo yoqeqesho lootitshala njengoko kungenakwenzeka oko.
Kodwa nantsi indlela onokuyenza ngayo ngokwakho…
Ukwazi iifizi zoqeqesho lootitshala, uya kuqala ukhethe indawo yokufunda enokuba lilizwe lakho, ngokulandelayo, kuya kufuneka ujonge iiyunivesithi ezibonelela ngale nkqubo kwaye ubuze malunga nemirhumo. Kwakhona, iifizi ziyahluka ngokwenqanaba lokufunda eyunivesithi okanye kwikholeji ke kuya kufuneka uchaze malunga nokubuza umrhumo.
Ukuba senzelwe isatifikethi, amaqabane, i-bachelor's, i-master's, okanye i-doctorate khetha ukuba ufuna ntoni kwaye ufumane isixa semali kuba ziyahluka.
Luluphi uqeqesho olufunekayo ukuze ube ngumfundisi-ntsapho?
Idigri enje ngomhlobo, i-bachelor's, i-master's, okanye i-doctorate ikuvumela ukuba ubalasele kwindawo yesifundo, iqela lobudala, okanye useto lwemfundo. Nangona ilayisenisi yoqeqesho lootitshala kunye neemfuno zahluka ngokwamazwe kodwa amanye amazwe afuna ukuba ootitshala banesidanga se-bachelor.
Yeyiphi eyona khosi ilungele ootitshala?
I-Bachelor yoBugcisa (i-BA) okanye i-Bachelor yeSayensi (i-BSc) enesimo sobutitshala esiqeqeshekileyo (i-QTS) zifundo zezifundo ezibandakanya uqeqesho lootitshala ukuvumela ukuba wenze idigri ye-honors kwaye wenze uqeqesho lwakho lootitshala ngexesha elifanayo.
Ke, sifikile esiphelweni sale FAQs kwaye ngethemba, sisuse ukungathandabuzeki okanye ezimbini kwaye saphendula imibuzo embalwa ebangela ukuba umntu acinge kule nkqubo.
Ngaphandle kokuqhubela phambili, masiqhubeke kuluhlu lweekhosi zoqeqesho lootitshala.
Ufunde kakuhle !!!
1 Yintoni iikhosi zoqeqesho lootitshala?
2 Zingaphi iindidi zoqeqesho lootitshala ezikhoyo?
3 Ikhosi yexesha elingakanani yoqeqesho lootitshala?
4 Zithini iintlawulo zoqeqesho lootitshala?
5 Luluphi uqeqesho olufunekayo ukuze ube ngumfundisi-ntsapho?
6 Yeyiphi eyona khosi ilungele ootitshala?
7 Uluhlu lweeKhosi zoQeqesho zoTitshala eziBalaseleyo
7.1 Ukuba nguMfundisi ongcono: Ukuphonononga uPhuhliso loBuchule
7.2 Abafuduki kunye nabaPhepheli kwiMfundo: Isixhobo sootitshala
7.3 Uqeqesho lootitshala: Ukukhetha iPGCE eyiyo yakho
7.4 Zilungiselele: Ungaba kanjani nguTitshala oManyeneyo
7.5 Uphuhliso Lootitshala: Ukumiliselwa Kwempilo Yengqondo KwiKharityhulamu
7.6 Utitshala we-SEL: Iinkqubo, amathuba, kunye neMixholo
7.7 Isikhokelo soqeqesho lootitshala: Ukufundisa ngeMbali yaseBritane eMnyama
7.8 Umntu wokufundisa kunye nokudala amagumbi okufundela afanelekileyo
7.9 Iziseko zokuFundisa ukuFunda: Intshayelelo kuVavanyo lwaBafundi
7.10 Uvavanyo kwiMfundo ePhakamileyo
7.11 Ukufundisa abantwana abaziziThulu: Ukuba nguMfundisi-ntsapho onikwe amandla
7.12 Ukuba nguMfundisi
7.13 Ingcali yoTitshala eyiyo
7.14 Ukukhuselwa kwabantwana kootitshala
7.15 Ubunkokeli ekwabelwana ngabo kunye noPhuhliso lweSikolo
7.16 INzululwazi yokuFunda-Into ekufuneka yaziwe ngutitshala ngamnye
7.17 Uhlalutyo loMfundisi-ntsapho waseKlasini
7.18 UTitshala oNxibeleleneyo- Ukufundisa ngenkulungwane yama-21
Uluhlu lweeKhosi zoQeqesho zoTitshala eziBalaseleyo
Ukwenza banzi imbono yakho, senze uluhlu lweekhosi ezili-18 onokukhetha kuzo.
Ukuba nguMfundisi ongcono: Ukuphonononga uPhuhliso loBuchule
Abafuduki kunye nabaPhepheli kwiMfundo: Isixhobo sootitshala
Uqeqesho lootitshala: Ukukhetha iPGCE eyiyo yakho
Zilungiselele: Ungaba kanjani nguTitshala oManyeneyo
Uphuhliso Lootitshala: Ukumiliselwa Kwempilo Yengqondo KwiKharityhulamu
Utitshala we-SEL: Iinkqubo, amathuba, kunye neMixholo
Isikhokelo soqeqesho lootitshala: Ukufundisa ngeMbali yaseBritane eMnyama
Umntu wokufundisa kunye nokudala amagumbi okufundela afanelekileyo
Iziseko zokuFundisa ukuFunda: Intshayelelo kuVavanyo lwaBafundi
Uvavanyo kwiMfundo ePhakamileyo
Ukufundisa abantwana abaziziThulu: Ukuba nguMfundisi-ntsapho onikwe amandla
Ingcali yoTitshala eyiyo
Ukukhuselwa kwabantwana kootitshala
Ubunkokeli ekwabelwana ngabo kunye noPhuhliso lweSikolo
INzululwazi yokuFunda-Into ekufuneka yaziwe ngutitshala ngamnye
Uhlalutyo loMfundisi-ntsapho waseKlasini
UTitshala oNxibeleleneyo- Ukufundisa ngenkulungwane yama-21
Kuwo wonke umsebenzi okanye ubungcali, kubalulekile ukuqhubeka nokuphonononga, ukukhula, kunye nokuphucula imeko yakho kwaye oku akuphelelanga kwicandelo lokufundisa. Le khosi iya kukunceda uqinise izakhono zakho njengotitshala kwaye ikufundise ngakumbi malunga nophuhliso lobungcali kootitshala.
Le khosi ibonelelwa nge-Intanethi ngeFutureLearn liBhunga laseBritane kunye neZiko lezeMfundo le-UCL kwaye liyenza ukuba ibe luluhlu loPhononongo lwelinye ilizwe kuluhlu lwezifundo zootitshala
Ihlabathi lichaphazeleka ziimfazwe kunye nezinye iindlela zobundlobongela ezichaphazela ngokuthe ngqo nangokungathanga ngqo ulutsha. Olu lutsha kufuneka lufundisiwe kwaye kuthatha uhlobo oluthile lwesakhono ukwenza loo nto kwaye olo lwazi luchanekileyo yile khosi.
Kule khosi, uya kufunda ukuba ungabanceda njani abafundi abajongana nokwenzakala okunokuba sisiphumo sempixano neemfazwe, ukukhulisa ukuzithemba kwabafundi, kunye nokufumana izimvo kunye neendlela ezinokukunceda uqonde abafundi bakho.
Olu lolunye uluhlu lweekhosi zoqeqesho lootitshala kwiYunivesithi yaseCoventry kwaye yenzelwe abantu abafuna ukungena kwicandelo lokufundisa. Uya kuphonononga okufunekayo ukuze ube ngutitshala ofanelekileyo ukuze ufumane izakhono ngokunjalo, wakhe ukuzithemba kwakho, kwaye ekugqibeleni ube nakho ukukhetha ikhosi ye-PGCE ekufaneleyo.
Ukufundisa kufuna ixesha elininzi kwaye ukuba njengotitshala awucwangcisi ixesha lakho kunye neeshedyuli ngokufanelekileyo, kuya kuba nzima kuwe. Le khosi ibandakanyiwe kuluhlu lwethu lweekhosi zoqeqesho lootitshala zokukuxhobisa ngezakhono zokucwangcisa, ukubonelela ngezixhobo zokulandela ixesha lokuzibophelela, ixesha elibekiweyo, kunye nemisebenzi, kwaye uncede ootitshala ekwenzeni inkqubo yombutho wabo enxibelelana nemihla ngemihla yabo- imisebenzi yosuku.
Njengotitshala, impilo yengqondo kunye nokuba sempilweni kwabafundi bakho kufanele ukuba kube yinto ekuxhalabisayo kwaye unokufunda ukukhuthaza impilo yomfundi kunye nokuphila kwakho ngokuphuhlisa iindlela zakho zokufundisa.
Awazi ukuba ungayenza njani loo nto?
Le khosi yongezwa kuluhlu lwethu lweekhosi zoqeqesho lootitshala ngenxa yeso sizathu, apho uza kuphonononga kwaye uxhotyiswe ngeendlela ezahlukeneyo zokufundisa ukuqonda nokukhuthaza impilo yengqondo yabafundi.
I-SEL imele ukuFunda ngezeNtlalo nangokweemvakalelo, luhlobo lwenkqubo yomfundi eyayidla ngokuqhutywa ezikolweni kwaye inamazinga aphezulu empumelelo kodwa ayifumani ngqwalaselo ayifunayo. Kule khosi, iinkqubo ezizodwa nezimiselweyo ze-SEL ziyaziswa kwaye zivavanywe kunye nezinye iindlela ezinokubakho.
Uya kufunda ukuba yintoni i-SEL emalunga nayo kunye nendlela enokuthi yenziwe ngayo kwizikolo nakwigumbi lokufundela ekufundiseni abafundi.
Yonke into, wonke umntu unembali, akunjalo?
Le khosi yenza ukuba kuluhlu lwethu lweekhosi zoqeqesho lootitshala kuba imbali yabantsundu ngumxholo obanzi wokuphonononga ngolwazi oluninzi lokufundisa, kwaye njengotitshala, uya kuqeqeshelwa ukuyifaka kwikharityhulamu yakho.
Uya kulufumana ulwazi ngendlela yokujongana nesihloko ngokufunda kwiingcali kwaye emva koko ngesakhono sakho esitsha esinezixhobo nolwazi ludlulisele kubafundi bakho.
Le khosi yenza ukuba kuluhlu lwethu lweekhosi zoqeqesho lootitshala kuba sisiseko okanye isiseko sokufunda. Njengotitshala, kuya kufuneka ubeke uhlobo lomlinganiswa, isimo sengqondo esibonisa ukuzithemba kubafundi bakho kwaye senze igumbi lokufundela libe yindawo yokufunda enempilo.
Ngale khosi, uya kube ujonga ezona zengqondo ziphambili kunye nendlela yokuzisebenzisa ekwandiseni ukuzibandakanya kwabafundi kunye nokufezekisa.
Le khosi iyenza ukuba ibe kuluhlu lwethu lweekhosi zoqeqesho lootitshala ngenxa yeendlela ezininzi eziluncedo kubantu abasele befundisa kunye nabo bangathanda ukujoyina lo msebenzi. Le khosi iya kuxhobisa, iphuhlise, kwaye yomeleze izakhono zakho ekufundiseni, kubungcali, kuvavanyo nakwezinye ezininzi.
Uya kufunda neendlela ezahlukeneyo zokunceda ukuvavanya ukufunda kwabafundi kunye nokuxhobisa ngezakhono zokuphuhlisa kunye nokusebenzisa iinkqubo zovavanyo ezisemgangathweni.
Ukuba ungutitshala ofuna ukufumana okona kulungileyo kwabafundi kunye novavanyo lwabo, ke le khosi yeyakho.
Ndicinga ukuba wonke utitshala uya kufuna ukuthatha le khosi kuba ngumsebenzi wabo ukufumana okona kulungileyo kubafundi babo.
Ngokubhalisa kule nkqubo, uya kufunda amanqanaba ahlukeneyo okulungiselela, ukudala, kunye nokuvavanya uvavanyo kwikhosi yakho. Ukuba ukulungele ukuphucula izakhono zakho zokufundisa, kuya kufuneka utsibele kuloliwe kwaye uzilungise, kunye nezikhokelo zeengcali, ukuze ube ngutitshala oqeqeshiweyo.
Abantwana abaziziThulu bafanelwe yimfundo, akunjalo?
Siyihlanganisile le khosi kuluhlu lwethu lweekhosi zoqeqesho lootitshala kuba thina kwi-Study Abroad iZizwe ziyavuma ukuba abantwana abazizithulu kufuneka babenolwazi lokufunda nokubhala njengabo bonke abantwana abaqhelekileyo. Oku kunokufezekiswa kuphela ngootitshala abagqiba kwelokuba bathathe ingubo kwaye bafundise aba bantwana.
Kule khosi, ootitshala baya kufumana izakhono ezixabisekileyo kunye nolwazi malunga nabantwana abazizithulu, inkcubeko yabo, kunye noluntu kunye nokuba ukufumana imfundo kungabuchaphazela njani ubomi babo ekuhlaleni, emphefumlweni nakwizifundo.
Usenokuba ubukukhangele oku kwaye mhlawumbi uzibuza ukuba kutheni singekabikho okanye ukuba ngekhe kufakwe kolu luhlu lweekhosi zoqeqesho lootitshala.
Ewe, le khosi yenzelwe abo banqwenela ukuba ngootitshala babancede bathathe isigqibo sokuba ngaba ubizo lolwakho ngokwenene, funda ukuba kunjani ukusebenza kwisikolo saseprayimari okanye sesekondari. Ngokubanzi, le khosi iya kukunceda uvavanye amanzi ngaphambi kokuba ungene echibini lokufundisa.
Ukufunda nge-Intanethi ngoku kuyinto enkulu kakhulu ukuze ube nakho ukufumana imfundo ekumgangatho wehlabathi ngokufunda kwi-Intanethi kwaye kubalulekile ukuba njengootitshala ufunde ukusebenzisa itekhnoloji ukulungiselela abafundi bakho. Le khosi iya kukukhokela kwiinkqubo zokufunda ezikwi-Intanethi, ekuxhobisa ngeendlela zokusebenza zokwakha ukuzibandakanya kwabafundi ngokufunda kwi-Intanethi.
Le khosi iyenzile kuluhlu lwethu lweekhosi zoqeqesho lootitshala ngenxa yamathuba amaninzi kunye nezibonelelo zokufunda kwi-Intanethi eziza nazo, likamva lemfundo kwaye akufuneki ushiywe ngasemva, joyina uloliwe ohambayo.
Ngaphandle kokufaka ulwazi kubafundi omnye umsebenzi katitshala kukukhusela abafundi babo kwimicimbi ethile efana nokuxhatshazwa kwabantwana. Njengotitshala, kuya kufuneka ube nobuchule ngohlobo "lweliso" ukuze uqaphele xa umntwana ephathwa gadalala kwaye emva koko uxele kwabasemagunyeni abafanelekileyo.
Ukhuseleko lwabantwana lubalulekile yiyo loo nto le khosi iphakathi kuluhlu lweekhosi zoqeqesho lootitshala kwaye kulapho ootitshala baya kuthi bafumane izakhono malunga nendlela yokuqaphela iimpawu zezilumkiso kunye nezalathi zokungahoywa nokuphathwa gadalala kwabantwana.
Ootitshala baziinkokeli kwigumbi lokufundela nasesikolweni ngokubanzi, kwaye kuye kwaboniswa ukuba ubunkokeli besikolo obusebenzayo bunefuthe elihle kwimpumelelo yomfundi, kumgangatho wokufundisa nakwinkuthazo yabasebenzi. Le khosi iphakathi kwoluhlu lweekhosi zoqeqesho lootitshala kuba iphonononga indlela iinkokeli zesikolo, ootitshala nabanye abanokuxhasa ngayo ukuphuhliswa kwendlela yokuhambisa isikolo kwinqanaba lesikolo.
Ukubhalisa kule khosi kuya kukuxhobisa ngolwazi oluphambili lwethiyori malunga nokhokelo olusasaziweyo kunye nezibonelelo zalo kunye nemizekelo esebenzayo yokuyisebenzisa.
Njengoko sele kukhankanyiwe apha ngasentla, wonke utitshala kufuneka ayazi isayensi yokufunda kwaye ukuba awuyenzi le khosi uya kukubonelela ngolwazi. Imalunga nokusebenzisa uphando lwangoku ukuphucula ukufunda kwigumbi lokufundela kunye nokuphonononga imiba eqhelekileyo ethintela abafundi ekufundeni ngokupheleleyo.
Kukho iitekhnoloji kunye neendlela zangoku onokuzisebenzisa njengotitshala ukuphucula izakhono zakho zokufundisa kwigumbi lokufundela kwaye le khosi ibonelela ngoku. Apha, kolu luhlu lweekhosi zoqeqesho lootitshala, uya kufunda indlela yokusebenzisa ulwazi oluqhutywa yidatha ukuphucula ukufundisa.
Kuluhlu lwethu lokugqibela lweekhosi zoqeqesho lootitshala, le nkqubo yenzelwe ukuba ube "ngutitshala onxibelelanayo", oko kukuthi, ukuphucula ukusetyenziswa kwetekhnoloji yedijithali yeenjongo zokufundisa kunye nokufunda nokunxibelelana nabanye ootitshala babafundi kwihlabathi liphela.
Oku kuzisa uluhlu lweekhosi zoqeqesho lootitshala kwaye kuya kufuneka wazi ukuba zonke iikhosi apha zibonelela ngesiqinisekiso sokugqitywa. Nangona kunjalo, ukufumana nje isatifikethi akunakukufikelela kude kwicandelo lokufundisa.
Eyona ndlela yokuhamba malunga noku kukuba ufumane isidanga sokufundisa kuqala emva koko uphucule izakhono zakho nolwazi ngokubhalisela nayiphi na yezi zifundo, ufumane isatifikethi, kwaye usongeze kwipotifoliyo yakho ukuze ubenobungcali ngakumbi.
Ukuba uyazi ukuba injani imfundiso phambi kokuba uqhubekeke nokwenza idigri eyunivesithi, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukubhalisa nakweziphi na iikhosi ezilapha ukuze ufumane ukuqonda.
Okokugqibela, zonke iikhosi ezilapha zifundiswa kwi-Intanethi akufuneki ukuba uye naphi na ngaphandle kokuhlala esofeni yakho ngePC okanye ithebhulethi kunye nonxibelelwano oluzinzileyo lwe-intanethi kwaye ufumane uqeqesho lokufundisa kumaziko aphezulu kwihlabathi liphela.
Ukusombulula iingxaki: Iindlela zabaTitshala naBafundi
Iikhosi eziphambili ze-21 zeKhosi kunye neZikolo eDubai ezineSatifikethi
IiWebhusayithi eziPhambili ze-13 zezeMfundo zaBafundi
Imfundo eSingapore: Izinto ezi-5 esinokuzifunda eSingapore
funda kwi-intanethi Iikhosi ze-Intanethi izifundo zekhompyutha
ezona khosi zoqeqesho zibheteleezona khosi zoqeqesho zibalaseleyo kwi-IntanethiIikhosi zasimahla zoqeqesho kwi-Intanethiuluhlu lweekhosi zoqeqesho lootitshalauluhlu lweekhosi zoqeqesho lootitshala ezinezatifikethiiikhosi ezikwi-intanethi zootitshalaiikhosi zoqeqesho lootitshala
Post Previous:Iiyunivesithi zaseOstreliya ngaphandle kweNtlawulo yokufaka isicelo sabaFundi beZizwe
Okulandelayo Post:Imisebenzi ePhambili ye-15 eMfuno eKhanada yaBafundi beZizwe ngezizwe